IELTS ဖြေရင် ဘာတွေသတိပြုမလဲ
ဖှဆေိုသူ မှားပှားတဲ့ နိုငငွံတကာ အငွဂြလိပစွာ အရညအွခငွှးစဈ စာမေးပှဲတဈခု ဖှဈတဲ့ IELTS (International English Language Testing System) ကို ဖှဆေိုတဲ့အခါ သတိပှုရမှာတှကေို အပိုငွးလေးပိုငွးစလုံး အတှကွ ဖောပွှပေးလိုကပွါတယွ။
* အမှတကွောငွးကောငွးရဖို့ အတှကွ ဝေါဟာရ စကားလုံး ကှှယဝွဖို့ အငမွတနွ အရေးကှီးပါတယွ။ စာတဈကှောငွးနဲ့ တဈကှောငွးမှာ အဓိပပြါယတွူ စကားလုံးတှေ မှားမှားသုံးပေးနိုငရွငွ အမှတပွိုမှားနိုငပွါတယွ။
ဒါပမေဲ့ တခှို့သူတှကေ ဒါကိုနားလညမွှုလှဲပှီး ကိုယနွဲ့ မရငွးနှီးတဲ့ စကားလုံးတှေ၊ စကားပှောရာမှာ သိပမွသုံးတဲ့ စကားလုံး အသဈအဆနွးတှကေို Writing မှာ ထည့သွုံးတတကွှတာက အမှတကွို ပိုလှော့စပေါတယွ။
Writing မှာ ဒီလိုစကားလုံးသဈတှေ တီထှငသွုံးရငွ စာအရေးအသားမှာ အမှားတှေ ပိုဖှဈစနေိုငပွါတယွ။ စာလုံးပေါငွး အလှဲကှောင့ဖွှဈဖှဈ၊ သဒဒြါအထားအသိုကှောင့ပွဲ ဖှဈဖှဈ အမှားပိုမှားနိုငလွို့ စကားလုံးအသဈတှေ အပေါမွှာ လိုတာထကပွို အာရုံမရောကစွဖေို့ အရေးကှီးပါတယွ။
* သဒဒြါအမှားကလညွး အမှတလွှော့စတေဲ့ အဓိကအကှောငွးအရာထဲမှာ ပါပါတယွ။ သဒဒြါအသုံးအနှုနွး နညွးနညွးလေးမှားရုံနဲ့ ၆.၀ ကှောရွဖို့ ခကသွှားစတော ကှိုသိထားသင့ပွါတယွ။
ဒါကှောင့ွ သဒဒြါအသုံးအနှုနွးကို ဂရုစိုကပွါ။ Task 1 မှာ သဒဒြါမှားနှုနွး နညွးနိုငပွမယေ့ွ Task2စာပုဒအွရှညကွှီးမှာ သဒဒြါမှားနိုငခွှေ ပိုမှားပါတယွ။ ဒါကှောင့ွ ကိုယကွှှမွးကငှတွဲ့ သဒဒြါအထားအသိုနဲ့ပဲ ဖှဆေိုပါ။
* စကားဆကသွုံးတာ သတိထားပါ။ စာကှောငွးလှအောငွ စကားဆကတွှေ အလှနအွကှှံ သုံးတာက လှဲသှားရငွ အမှတမွရတဲ့အပှငွ အမှတလွှော့တတပွါတယွ။
စာကှောငွးကို လိုတာထကွ မရှညစွဖေို့ အရေးကှီးပါတယွ။ ဖှတသွင့တွဲ့နရောမှာ စာကှောငွးကို မှနမွှနကွနကွနွ ဖှတထွားပါ။ ပှီးရငွ စာကှောငွးအသဈ ပှနစွရေးပါ။ ဒါဆို စကားဆကနွရောမှာ အမှားနညွးပါလိမ့မွယွ။
* စာမှားမှားဖတပွါ။ နိုငငွံတကာမဂဂြဇငွး၊ သတငွးစာတှကေ ဆောငွးပါးတှကေို မှားမှားဖတပွှီး လေ့ကငှ့ထွားပါ။
* Reading ဖှတေဲ့နရောမှာ တဈပုဒလွုံးကို အေးဆေးဖတဖွို့ အခှိနမွလုံလောကပွါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဆိုလိုတဲ့ သဘောတရား နားလညအွောငွ ကှိုးစားပှီးဖတပွါ။ အရေးကှီးတဲ့ စကားလုံးတှကေို မဉွှးတားထားပါ။
* IELTS မေးခှနွးတှမှော Reading နဲ့ Writing က အခှိနမွလုံလောကတွဲ့ ပှူနာ ရှိပါတယွ။ ဒါကှောင့ွ Reading ဖှတေဲ့နရောမှာ မေးခှနွးတဈပုဒစွီကို အခှိနဘွယလွောကယွူမယွ ဆိုတာ ကှိုတှကထွားမှ တောရွုံကနှိုငမွှာပါ။
* ကိုယမွဖှနေိုငတွဲ့ မေးခှနွးတှဆေို စဉွးစားမနပေါနဲ့။ ကှောသွှားလိုကပွါ။ အားလုံးဖှပှေီးတော့မှ မေးခှနွးပှနဖွတပွှီး ဖှပေါ။ အဲဒီလို ဖှဆေိုဖို့လညွး သီးသန့အွခှိနထွားပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
* Reading မေးခှနွးပုံစံက ၈ မှိုးလောကွ ရှိပါတယွ။ စာမေးပှဲမဖှခငွေ အဲ့ဒီပုံစံ အားလုံးကို ကှိုတငလွေ့ကငှ့ထွားပါ။
* သတိပှုဖို့က Reading test မှာ အခှိနစွီမံခန့ခွှဲမှု စနဈကဖှို့နဲ့ မေးခှနွးပုံစံ နားလညဖွို့က အရေးကှီးဆုံးပါ။
* စကားပှောတဲ့နရောမှာ စာရေးသလိုပဲ အစ-အလယွ-အဆုံး အားလုံးပှည့စွုံဖို့ လိုပါတယွ။ ဒါကှောင့ွ IELTS Speaking မှာ နောကဆွုံးအဆုံးသတကွို ပိုငပွိုငနွိုငနွိုငွ အဆုံးသတပွေးပါ။ ဒါမှ Score 6.5 နဲ့ အထကွ ရနိုငပွါလိမ့မွယွ။
* ဝေါဟာရ ကှှယဝွဖို့လညွး အရေးကှီးပါတယွ။ သာမနွ Score 5.0 လောကပွဲ ဆိုရငတွော့ အဓိပပြါယတွူ ဝေါဟာရတှပေဲ ထည့ပွှောသှားလို့ ရပါတယွ။ ဒါပမေဲ့ ၆.၀ အထကွ မှနွးထားတယွ ဆိုရငတွော့ ဝေါဟာရမှားမှား လေ့လာထားပါ။
* ကိုယ့ရွဲ့အသံထှကကွို စိတမွပူပါနဲ့။ စကားကို ရှငွးရှငွးလငွးလငွးနဲ့ အသံထှကွ ပီသအောငသွာ ပှောပါ။ အရေးကှီးတာက စကားမှနမွှနပွှောတတတွဲ့သူတှေ Speaking ဖှတေဲ့ နရောမှာ ဂရုစိုကပွါ။ ကိုယပွှောတဲ့စကား မသဲကှဲရငွ ကိုယပွဲ အမှတလွှှော့ ခံရမှာပါ။
* တဈခါတဈလကရှငွေ Examiner မေးတဲ့ မေးခှနွးကို တဈခါတညွး နားလညဖွို့ ခကပွါလိမ့မွယွ။ အဲ့လိုမှိုး အခှိနမွှာ “Pardon” လို့ မမေးဘဲ “Can you please repeat the question” လို့ မေးတာက ပိုပှီး သင့တွောပွါတယွ။
* Speaking ဖှတေဲ့နရောမှာ ကိုယ့အွတိတအွကှောငွးကို ပှောရမယဆွို “used to” အသုံးနှုနွးလေး သုံးစခငှပွေါတယွ။
* အရေးကှီးဆုံး နောကတွဈခကှကွ ကိုယပွှောနတေဲ့ Topic ထဲကနေ Examiner ကို မေးခှနွးပှနမွေးဖို့ မလုပမွိပါစနေဲ့။
* Speaking test ပှီးသှားတဲ့ အခှိနကွရှငွ Examiner ကို “bye-bye” “thank you for your time” “nice meeting you” “I hope to see you again” လို့ မပှောမိပါစနေဲ့။ ဒီအတိုငွးပဲ ထှကလွာခဲ့ပါ။
* တခှို့မေးခှနွးတှမှော ကိုယကွ လိမညွာပှီး ဖှတောဖှဈဖှဈ အမှနကွို အနညွးငယွ လှဲဖှတောဖှဈဖှဈ ဖှလေို့ရပါတယွ။ ကိုယနွဲ့ပတသွကတွဲ့ မေးခှနွးတှကေို အမှနအွတိုငွး ဖှရမယေလွို့ မသတမွှတထွားပါဘူး။
ဒါပမေဲ့ လကရွှိ အမှနတွကယွ ဖှဈနတေဲ့ အကှောငွးအရာတှကေိုတော့ လိမညွာပှောတာ၊ အလှနတွရာ ခှဲ့ကားပှီးပှောတာ မဖှဈဖို့ သတိထားပေးပါ။
* ဖှဆေိုသူက မေးနိုငမွယ့ွ အကှောငွးအရာ (Topic) နဲ့ မေးခှနွးပုံစံကို ကှိုတငခွန့မွှနွးတတဖွို့ လေ့ကငှ့ပွေးထားရပါမယွ။ ဘယသွူက ဘယသွူ့ကို ပှောတဲ့စကားလဲ၊ ဘာအကှောငွး ပှောတာလဲဆိုတာ ခန့မွှနွးနိုငရွငွ ဖှရတောလညွး အတနငွယွ လှယကွူပါတယွ။ နာမညတွှေ၊ လိပစွာတှနေဲ့ နံပါတတွှကေို အကှမွးခရှေးပှီး မှတထွားပါ။
* မေးခှနွးတဈခု ဖှပှေီးလို့ နောကထွပမွေးခှနွး မစခငမွှာ အခှိနတွဈမိနဈ ရပါတယွ။ စကကြန့ွ ၃၀ က မေးခှနွးဟောငွးက အဖှအတှကွေ ဖှဈပှီး ကနှစွကကြန့ွ ၃၀ ကတော့ လာမယ့ွ မေးခှနွးအတှကွ ကှိုတငစွဉွးစားဖို့ပါ။ ဒါပမေဲ့ ဖှဆေိုသူက မေးခှနွးဟောငွးအတှကွ အဲ့ဒီအခှိနသွုံးမယ့အွစား မေးခှနွးသဈအတှကွ ပှငဆွငထွားရငွ ပိုအဆငပွှနေိုငပွါတယွ။
* Listening မှာ တဈခါတဈလေ အထကအွောကွ မေးခှနွးနှဈခုက ဆကစွပမွေးတတပွါတယွ။ ဒါကှောင့ွ မေးခှနွးနှဈခုကို တပှိုငတွညွး ကှည့တွတဖွို့လညွး လေ့ကငှ့ထွားပါ။
* မေးခှနွးတဈခု ကိုယမွကှားမိလို့၊ နားမလညလွို့ဆိုရငွ ကှောသွှားပါ။ အခှိနကွုနခွံ မစဉွးစားပါနဲ့။ အခှောခရှေးတဲ့ အခှိနမွှ စဉွးစားပှီး ခန့မွှနွးခှကေို ထည့ရွေးလိုကပွါ။ အဖှနရေော အလှတမွထားခဲ့ပါနဲ့။
* Listening ဖှဆေိုတဲ့အခါ စာလုံးပေါငွးသတပွုံနဲ့ သဒဒြါမှနကွနအွောငွ ဖှပေါ။ အဖှကေို သိပမယေ့ွ စာလုံးပေါငွးလှဲရငွ အမှတမွရရှိနိုငပွါဘူး။
Ref: www.hubpages.com. www.dcielts.com. www.ieltsbuddy.com. နိုငငွံတကာ IELTS ဆရာမှားရဲ့ သငကွှားပို့ခခှကှမွှားမှ ကောကနွှုတခွကှအွခှို့